မိန်းကလေးတွေ အလေးမ သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၆)ချက် -
မိန်းကလေးတွေ အလေးမ သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၆)ချက်
Posted on March 13, 2019 March 14, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
နှင်းတို့ Gym ဆော့တဲ့အချိန်ကျရင် မိန်းကလေးတွေဆီက အများဆုံးကြားရတဲ့စကားက ‘အမလေး ဆရာ အလေးတုံးအကြီးကြီးတွေမ,မဘူးနော်။’ ‘ဆရာ သမီးကလေ ဒီအလေးတွေမ,မနိုင်ဘူး။ အလေးကြီးတွေမပေးပါနဲ့နော်။’ ‘ဆရာ ဒီအလေးတွေမ,ရင် ယောကျာ်းတွေလို လက်မောင်းကြီးတွေ၊ ကြွက်သားတွေ ထွက်လာမှာ။ မ,မဘူး’ ဆိုတဲ့စကားတွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ မိန်းကလေးတွေ ကြောက်ကြတဲ့ အဲဒီအလေးကို မ,သင့်တဲ့အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့…
(၁) အဆီချတဲ့နေရာမှာ အများကြီးအထောက်အပံ့ပေးတယ်။
အလေးမ,တယ်ဆိုတာ ကြွက်သားတက်ဖို့၊ ကြွက်သားတွေ ကြီးလာဖို့လို့ပဲ သိထားကြတာမလား? တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီလိုကြွက်သားတွေက အဆီနေရာကို အစားဝင်လာတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ပိုကျစ်လျစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်ရော လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပါ အဆီလောင်ကျွမ်းတာကို အထောက်အကူပေးပါတယ်။
တကယ် အဲဒီလိုအသားကုန်အားထုတ်ပြီး မာန်နဲ့အံကြိတ်လုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ခါတိုင်းအိပ်မပျော်တဲ့လူတောင် ဒီလိုအလေးမ,လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အားအင်တွေအသားကုန် ထုတ်လိုက်ရတာမို့ ပင်ပန်းပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေမှာပါ။
အားအင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရော စိတ်ရောပေါ့နော်။ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ ယောင်းတို့သိတဲ့အတိုင်း အလေးမ,တဲ့အချိန်မှာ တစ်ဆင့်ချင်းထပ်ထပ်ပြီးတိုးနေရတာမို့ အားအင်အသစ်တွေရလာပြီး စိတ်ဓာတ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲစိန်ခေါ်နေရတာမို့ မလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေ ငါလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပြီး လူရောစိတ်ပါ ကောင်းကောင်းအင်အားဖြစ်လာစေပါတယ်။
မာဆယ်တွေတောင့်လာလေလေ ကိုယ့်ရဲ့ကောက်ကြောင်းကပိုပီပြင်လေပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပေါ်မှာနှင်းပြောထားတဲ့အတိုင်း အဆီတွေလောင်ကျွမ်းတဲ့အချိန်မှာ အစားဝင်လာတဲ့ ဒီကြွက်သားတွေက ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲ သွားမှာမို့ သေချာပေါက် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းက ပေါ်ထွက်လာမှာပဲလေ။
(၅) နှလုံးရောဂါဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အလေးမ,တဲ့အားကစားကို လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေက သာမန်အမျိုးသမီးတွေထက် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ နှလုံးရောဂါတွေ အဖြစ်နည်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအားထုတ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက သွေးလည်ပတ်မှုနှုန်းကို မှန်စေပြီး သွေးတွင်းအဆီဓာတ်၊ အချိုဓာတ်တက်တာတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးလို့လေ။
Related Article >>> ဘယ်သူကမှန်တယ်လို့ ပြောလိုက်မှန်းမသိတဲ့ ဝိတ်လျှော့နည်းအလွဲများ
ဒါကတော့ အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာ အရမ်းသိသာတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ပျင်းခဲ့သမျှကို အများဆုံးဒဏ်ခံရမှာက အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ အရိုးပွတာ၊ ခြေလက်တွေ မခိုင်တော့တာ စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ့်အရိုးကို သန်မာအောင် မလေ့ကျင့်ခဲ့လို့ပါပဲ။ အခုအလေးမ,တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးက ကြွက်သားတွေတင်မဟုတ်ဘူး အရိုးတွေကိုပါ သန်မာစေဦးမှာမို့ မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပါပဲလို့။
အဓိကအားဖြင့် ဒီလိုအလေးမ,တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း ပြေလျော့စေပါသေးတယ်။ တစ်ခုခုဒေါသဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒါကိုဒီဖက်ထဲစိတ်ထည့် အော်ဟစ်ပြီးအလေးကိုမ, ဖွင့်ထုတ်လိုက်ရင် အနည်းနဲ့အများတော့ ကျေနပ်သွားတာပဲလေ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ မြန်မြန်မအိုစာဘဲ အရွယ်တင်နုပျိုချင်ရင်၊ ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာနေသွားချင်ရင် အလေးမ,တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပေးကြပါလို့!!!!
References : bodybuilding, verywellfit
နှငျးတို့ Gym ဆော့တဲ့အခြိနျကရြငျ မိနျးကလေးတှဆေီက အမြားဆုံးကွားရတဲ့စကားက ‘အမလေး ဆရာ အလေးတုံးအကွီးကွီးတှမေ,မဘူးနျော။’ ‘ဆရာ သမီးကလေ ဒီအလေးတှမေ,မနိုငျဘူး။ အလေးကွီးတှမေပေးပါနဲ့နျော။’ ‘ဆရာ ဒီအလေးတှမေ,ရငျ ယောကျြားတှလေို လကျမောငျးကွီးတှေ၊ ကွှကျသားတှေ ထှကျလာမှာ။ မ,မဘူး’ ဆိုတဲ့စကားတှပေါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ မိနျးကလေးတှေ ကွောကျကွတဲ့ အဲဒီအလေးကို မ,သငျ့တဲ့အကွောငျးအရငျးရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့…
(၁) အဆီခတြဲ့နရောမှာ အမြားကွီးအထောကျအပံ့ပေးတယျ။
အလေးမ,တယျဆိုတာ ကွှကျသားတကျဖို့၊ ကွှကျသားတှေ ကွီးလာဖို့လို့ပဲ သိထားကွတာမလား? တကယျတမျးကတြော့ ဒီလိုကွှကျသားတှကေ အဆီနရောကို အစားဝငျလာတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျက ပိုကဈြလဈြပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခြိနျရော လုပျပွီးတဲ့အခြိနျမှာပါ အဆီလောငျကြှမျးတာကို အထောကျအကူပေးပါတယျ။
တကယျ အဲဒီလိုအသားကုနျအားထုတျပွီး မာနျနဲ့အံကွိတျလုပျရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ကိုယျ့ရဲ့အိပျစကျခွငျးကို အရမျးအထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ခါတိုငျးအိပျမပြျောတဲ့လူတောငျ ဒီလိုအလေးမ,လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အားအငျတှအေသားကုနျ ထုတျလိုကျရတာမို့ ပငျပနျးပွီး နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောစမှောပါ။
အားအငျဆိုတဲ့နရောမှာ ခန်ဓာကိုယျရော စိတျရောပေါ့နျော။ ခန်ဓာကိုယျကတော့ ယောငျးတို့သိတဲ့အတိုငျး အလေးမ,တဲ့အခြိနျမှာ တဈဆငျ့ခငျြးထပျထပျပွီးတိုးနရေတာမို့ အားအငျအသဈတှရေလာပွီး စိတျဓာတျကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အမွဲစိနျချေါနရေတာမို့ မလုပျနိုငျတဲ့အနအေထားကနေ ငါလုပျကိုလုပျနိုငျတယျဆိုတာမြိုးဖွဈလာပွီး လူရောစိတျပါ ကောငျးကောငျးအငျအားဖွဈလာစပေါတယျ။
မာဆယျတှတေောငျ့လာလလေေ ကိုယျ့ရဲ့ကောကျကွောငျးကပိုပီပွငျလပေဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပျေါမှာနှငျးပွောထားတဲ့အတိုငျး အဆီတှလေောငျကြှမျးတဲ့အခြိနျမှာ အစားဝငျလာတဲ့ ဒီကွှကျသားတှကေ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ လိုအပျတဲ့အစိတျအပိုငျးတှကေိုပဲ သှားမှာမို့ သခြောပေါကျ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးက ပျေါထှကျလာမှာပဲလေ။
(၅) နှလုံးရောဂါဖွဈတာကို ကာကှယျပေးတယျ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ အလေးမ,တဲ့အားကစားကို လုပျတဲ့အမြိုးသမီးတှကေ သာမနျအမြိုးသမီးတှထေကျ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ နှလုံးရောဂါတှေ အဖွဈနညျးပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအားထုတျရတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ သှေးလညျပတျမှုနှုနျးကို မှနျစပွေီး သှေးတှငျးအဆီဓာတျ၊ အခြိုဓာတျတကျတာတှကေိုလညျး လြှော့ခပြေးလို့လေ။
Related Article >>> ဘယျသူကမှနျတယျလို့ ပွောလိုကျမှနျးမသိတဲ့ ဝိတျလြှော့နညျးအလှဲမြား
ဒါကတော့ အသကျကွီးတဲ့အခြိနျမှာ အရမျးသိသာတယျ။ ငယျငယျတုနျးက ပငျြးခဲ့သမြှကို အမြားဆုံးဒဏျခံရမှာက အသကျကွီးလာတဲ့အခြိနျမှာ အရိုးပှတာ၊ ခွလေကျတှေ မခိုငျတော့တာ စတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒါတှဖွေဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို ပွနျရှာကွညျ့လိုကျတော့ ငယျငယျတုနျးက ကိုယျ့အရိုးကို သနျမာအောငျ မလကေ့ငျြ့ခဲ့လို့ပါပဲ။ အခုအလေးမ,တဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးကတော့ ကိုယျ့ရဲ့တဈကိုယျလုံးက ကွှကျသားတှတေငျမဟုတျဘူး အရိုးတှကေိုပါ သနျမာစဦေးမှာမို့ မဖွဈမနလေုပျသငျ့တဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးပါပဲလို့။အဓိကအားဖွငျ့ ဒီလိုအလေးမ,တဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ကိုယျ့ရဲ့စိတျဖိစီးမှုတှကေိုလညျး ပွလြေော့စပေါသေးတယျ။ တဈခုခုဒေါသဖွဈခဲ့ရငျလညျး အဲဒါကိုဒီဖကျထဲစိတျထညျ့ အျောဟဈပွီးအလေးကိုမ, ဖှငျ့ထုတျလိုကျရငျ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ကနြေပျသှားတာပဲလေ။ ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ မွနျမွနျမအိုစာဘဲ အရှယျတငျနုပြိုခငျြရငျ၊ ကိုယျ့ဘဝတဈလြှောကျလုံးကဈြကဈြလဈြလဈြနဲ့ ကနျြးကနျြးမာမာနသှေားခငျြရငျ အလေးမ,တဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျပေးကွပါလို့!!!!
Tagged benifits, Fitness, girls, Health, lift, Weight
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးကျစေဖို့ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို ဘယ်အချိန်မှာစားရမလဲ ?
Posted on February 18, 2019 February 19, 2019 Author Stella
ကိုယ်လုံးလှချင်လို့ Gym ဆော့နေတဲ့ယောင်းတွေ အစားအသောက်စားတဲ့ပုံစံမှားမနေစေဖို့
အလုပ်များတဲ့ အချိန်တွေမှာတောင် ဝိတ်ကျစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅)ခု
Posted on December 1, 2017 Author Akari
အလုပ်တွေများလွန်းအားကြီးလို့ ဝိတ်လည်းမချနိုင်ပါဘူး အေတို့ရယ် ဆိုတဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတို့ အတွက်
ကိုယ်အလေးချိန်ကို အစားအသောက်လေးနဲ့ ထိန်းကြမယ်..
Posted on September 21, 2017 September 21, 2017 Author Hnin Ei Oo
ကဲ.. ကျပြီးသားဝိတ်လေးတွေ ပြန်မတက်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေကို လိုက်နာဖို့တော့ လိုမယ်နော်…
အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ မသန္တာလှိုင်ပြောပြတဲ့ အကြံပြုချက် (၃) ချက်
မိန်းကလေးတွေဘက်က လက်ထပ်ဖို့ထိရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ လမ်းခွဲချင်လာရတဲ့အကြောင်းများ